2021 PVC Mpempe akwụkwọ na-eme ka igwe m na-akpaka igwe na-akpaghị aka ma ọ bụ Weldo Malry Enamel Onye na-eweta
ịkụnye ụbụrụ na anya n'ime igwe
Desktọ na Desktọ
Vetikal PVC Nyefee igwe
Ihe eji eme ihe kristal na-ahụ anya
Ahịrị na-emepụta akpaaka
Igwe nwere ọgụgụ isi na-ele
Mpempe PVC na-eme igwe nkwado
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Waldo?
Ihe ngwọta & ikpe
Obere igwe diamond diamond diamond
Dicha mma roba
Mpempe akwụkwọ rot
TPR na-acha uhie uhie
Mmepụta roba nkwalite
Blobas akpa Tag Inye
Bloba igwe eji eme ihe
Igwe nwere ọgụgụ isi enamel
Ihe osise eserese igwe na-acha uhie uhie
Automatics igwefoto igwe enamel
Ihe eji eme ihe na-ese ihe igwe na-ese ihe eji eme ihe
Igwefoto akpaka na-ele anya maka mkpuchi injin
Maltal ma ele anya Enamel | Nkwalite Sauverir
Uwe igwe nwere ọgụgụ isi
Ngwa igwe kristal
Mosaie na-eme ka akpaaka na-akpaghị aka
Epoxy Slickter | Pun akara
Uwe na-akwalite igwe
Epoxy na-achị igwe maka bọtịnụ
Kpochapụ Epoxy Coming Mechie | Ego
Ụlọ ọrụ eletriki ụlọ
Nrụpụta amamịghe malitere na WElDO
Onye ndu na mgbanwe nke teknụzụ igwe ọhụụ nwere ọgụgụ isi
N'ime iri afọ nke ahụmịhe nke ụlọ ọrụ bara ụba, WELDO lekwasịrị anya na igwe na-enyefe igwe na agba agba. Ọ agafeela asambodo sistemụ ISO9001 dị mma yana nwee ọtụtụ ikike ikikere ọgụgụ isi na ọtụtụ nwebisiinka ngwanrọ. Companylọ ọrụ anyị agafeela asambodo ụlọ ọrụ nwere okpukpu abụọ, ọkwa teknụzụ dị ugbu a na ọnụ ahịa ahịa eruola ọkwa ụlọ ọrụ ụwa.
Mobile abụọ ojii elu na-agba igwe
Ngwa: 1.dabara maka a dịgasị iche iche nke mmiri mmiri ihe, dị ka mmiri na agba, epoxy resin AB mama, enamel, UV mama, electronic silicone, crystal mama, plastic ink, metal ink, EMI eduzi gluu, conductive cohesive, ozugbo mama, mgbatị mama, solder tapawa, mmanu, ọlaọcha mama, red mama, thermal tapawa, oké ọkọchị mgbochi tapawa, uzo agba, ịghasa gwara gị n'ụlọnga, Pu resin, ala / etiti viscosity mama, wdg. Enwere ike itinye ya n'ọrụ iji nyefee ihe mmiri mmiri na ihe arụ ọrụ dị iche iche, dịka igwe, plastik, osisi, akwụkwọ mmado na ihe ndị ọzọ.
Weldo 5 agba ịkwanyere / Silicon labelụ akpaka dispenser igwe
Atụmatụ: 1. mbubata JPG faịlụ ka software na-enyefe track. 2.Using kọmputa mmemme, software bụ n'ụzọ doro anya na anya, adaba na ngwa ngwa. 3.Single nozzel ma ọ bụ ọtụtụ nozulu nwere ike iji dị ka n'ezie mmepụta. Max 5 nozzles na-arụkọ ọrụ ọnụ iji melite mmepụta. 4.Up na bọtịnụ ụzọ mkpirisi usoro ihe ntanetị dị iche iche, uwe maka ọtụtụ usoro mmepụta. 5.Mgbe emechara mmemme ahụ, enwere ike ịchekwa ya na kọmpụta ma ọ na-adịgide adịgide. Mgbe ekwesịrị ịme ngwaahịa ahụ oge ọzọ, enwere ike ịkpọ mmemme ahụ ozugbo na-enweghị mmemme nke abụọ. 6.Dispensing abụọ Ebu n'out oge na ebu ọnọdụ ọrụ. 7.Suit gbagwojuru anya na elu uru-kwukwara ịkwanyere na silicone ngwaahịa. 8.Rapid mmepụta, otu igwe bụ Ẹkot 3 5 onye ọ bụla na-arụ ọrụ, nke nwere ike ibelata nke ukwuu iji oge nnyefe. 9.Stably-eme ka ịkwanyere / silicone ngwaahịa, elu àgwà, ala ntụpọ ọnụego ， nwere ike inyere iji belata na-eri. 10.Software na igwe ọrụ dị mfe ịmụta ， nwere ike inyere aka belata oge ọzụzụ. 11. Mmemme usoro: Dot, line, arc.
Weldo 12 agba ịkwanyere / Silicon labelụ akpaka dispenser igwe
Atụmatụ: 1.Bubata JPG ma ọ bụ DXF faịlụ ka software na-enyefe usoro egwu. 2.Flexible mmemme usoro, nwere ike dị ka ndị ahịa fancy ịhọrọ kọmputa graphic mmemme ma ọ bụ na-akụzi igbe (kemfe) mmemme. 3.Single nozzel ma ọ bụ ọtụtụ nozulu nwere ike iji dị ka n'ezie mmepụta. Max12 nozzles na-arụkọ ọrụ ọnụ iji melite mmepụta. 4.Up na bọtịnụ ụzọ mkpirisi usoro ihe ntanetị dị iche iche, uwe maka ọtụtụ usoro mmepụta. 5.Mgbe emechara mmemme ahụ, enwere ike ịchekwa ya na kọmpụta ma ọ na-adịgide adịgide. Mgbe ekwesịrị ịme ngwaahịa ahụ oge ọzọ, enwere ike ịkpọ mmemme ahụ ozugbo na-enweghị mmemme nke abụọ. 6.Dispensing abụọ Ebu n'out oge na ebu ọnọdụ ọrụ. 7.Suit gbagwojuru anya na elu uru-kwukwara ịkwanyere na silicone ngwaahịa. 8.Rapid mmepụta, otu igwe bụ Ẹkot 3 5 onye ọ bụla na-arụ ọrụ, nke nwere ike ibelata nke ukwuu iji oge nnyefe. 9.Stably-eme ka ịkwanyere / silicone ngwaahịa, elu àgwà, ala ntụpọ ọnụego ， nwere ike inyere iji belata na-eri. 10.Can jikọtara ya na robot iji mepụta usoro mmepụta akpaghị aka, nke nwere ike mepụta ma belata ụgwọ ọrụ. 11.Software na igwe ọrụ dị mfe ịmụta ， nwere ike inyere aka belata oge ọzụzụ. 12. Mmemme usoro: Dot, line, arc.
Weldo 18 agba ịkwanyere / Silicon labelụ akpaka dispenser igwe
Ngwa ngwa: 1.Gift ngwaahịa 2.Keychain, mmanya ute, cup coaster, akpa tag, Pen ọkwọ ụgbọala ikpe, 3.Silicone mobile cae, elekere anya silicone, nkwojiaka silicone, onye na-ejide ekwentị ekwentị PVC, onye na-emeghe kalama PVC. 4.zipper puller, baajị roba, elu akpụkpọ ụkwụ, nko na loop fasteners 5.Shoes machie, TPR anticollision warara maka uwe, akpụkpọ ụkwụ naanị
Ofụri Esịt akpaghị aka mmepụta technology, atọhapụ ọrụ, ịzọpụta ọrụ ma melite arụmọrụ!
WELDO na-enye akụrụngwa akụrụngwa dị elu, ihe ngwanrọ na ngwa teknụzụ ahaziri iche iji nyere ndị ahịa aka ịbawanye mgbanwe azụmahịa, bulie arụmọrụ arụmọrụ ma nweta ebumnuche nkwado, mee igwe na akụrụngwa na-abawanye arụmọrụ na arụmọrụ ngwaahịa, gbanwee nrụpụta nrụpụta ma nwekwuo uru.
WELDO ngwa ngwa akụrụngwa na-enye ụdị nke na-ekesa igwe na scara robot na ndị ahịa ụwa, a na-eji ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ebe na elektrọnik, ụgbọala, ngwa ụlọ, ngwa ngwa akpụkpọ ụkwụ, akwụkwọ mmado, ọgba tum tum, rọba rọba, baajị ngwaike, onyinye ọla, Elekere, nri, golf, ihe osise ntu, ngwa ekwentị mkpanaka, iko, na ubi ndị ọzọ. Ndị ahịa na-emekọrịta ihe ogologo oge gụnyere Midea, Huawei, Greek, Skyworth, Haier, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche nke Fortune 500 na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke imepụta ụlọ ọrụ obere na nke obere.
Production labeelu nke elu na-agba igwe
Nkọwapụta nke igwe ọsọ ọsọ
Igwe ọsọ dị elu maka ngwaahịa arc na-enwu gbaa
$ $ $> Igwe di elu maka ngwa ocha di elu
Agba agba agba tum tum
Mgbapu igwe nkpuchi
WEIDO Agba akara ụgbọ ala nke igwe dị elu
E guzobere WELDO na Machị 2007.
WELDO bụ ụlọ ọrụ teknụzụ nke na-elekwasị anya na nyocha na mmepe, mmepụta, na ire ahịa nke ngwa ọrụ akpaka maka njikwa mmiri, dị ka inyeaka gluu na-ekesa, na-ekesa plastik, agba, na valvụ ịgba. Maindị isi anyị gụnyere igwe na-ekesa ihe na scara robot, wdg.
Nye ụlọ ọrụ na-eduga nwere ọgụgụ isi n'ichepụta technology, ọkachamara, zuru okè, na-adọ tupu ire, ire, Mgbe-sales ọrụ, otutu ahaziri technology ngwa ngwọta, n'ichepụta elu visual akpaaka.
Kpọtụrụ anyị maka ihe ngwọta ụlọ ọrụ
Mepụta na nyocha na ịmepụta azịza ọgụgụ isi nke na-enye uru maka ụlọ ọrụ dịka mkpa ha si dị.